ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ခြင်းနှင့် လွဲမှားနေသောအယူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ခြင်းနှင့် လွဲမှားနေသောအယူများ
Posted by Dote Kha on Sep 18, 2013 in Buddhism | 29 comments
လူတစ်ယောက် သေပြီဆို မြန်မာတွေရဲ့ ထုံးစံ အရ ဖဲဝိုင်းထောင်တယ် ဟဲဟဲ။ လာလာခြင်း ဆောက်နဲ့ ထွင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ အတည်ပြောတာ။ မယုံဘူးလား။ လက်တွေ့ပြလို့ ရတယ်။ ပြောင်တာပါ။ နောက်ပိုင်း မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတော်များများဟာ ဆိုရင် လူတစ်ယောက် သေပြီဆို သေပြီး တစ်ပတ်လုံးလုံး သရဲ၊ ဝိဥာဉ် အဖြစ်နဲ့ အိမ်နားမှာ တစ်ဝဲလည်လည် ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ တစ်ပတ်ပြည့်မှသာ သွားချင်တဲ့ နေရာ သွားကြတယ်ပေါ့။ ဒါကိုတောင်မှ ကိုယ့်အိမ် အနီးအပါးမှာ သရဲ ဖြစ်မယ်လို့ပဲ ယုံကြည်နေကြတုန်းပဲ။ သံယောဇဉ် တယ်ကြီးကြတဲ့ လူမျိုးကိုး ခင်ဗျ။
ဘုရားဟောအရ (၃၁) ဘုံ ရှိတယ်။ အပါယ် လေးဘုံ၊ လူဘုံ၊ နတ်ဘုံ ၆ ဘုံ၊ ဗြဟ္မာ့ဘုံ ၂၀၊ ပေါင်းတော့ ၃၁ ဘုံ ရှိတယ်။ ဒါကို သေပြီး သရဲ ဖြစ်တယ် လို့ချည်း ဇွတ်ယူဆ နေကြလေတော့ ကျန်တဲ့ ဘုံတွေ ဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိဘူး။ မျက်စိမှောက်ပြီး ပျောက်သွားတယ်ပဲ ထားလိုက်ပါတော့ ဟဲဟဲ။ ပြောင်တာပါ။ ဆိုသလို မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်လေတော့ သရဲနဲ့ ငရဲပဲ သိကြသပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ သေရင် ချက်ချင်း သရဲ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆနေကြတာပေါ့။ အများစုကို ပြောတာပါ။ သိတဲ့လူတွေ မပါပါဘူး။
ပြီးတော့ ဆွမ်းသွတ်၊ အမျှဝေ တဲ့ ကိစ္စမှာတော့ ပေးလှူခြင်း အရာမြောက်တဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်သူအတွက် ကုသိုလ် ရပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အမျှဝေတယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ နည်းနည်း လိုသေးတယ်။ သေသွားသူအတွက် ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် သေသွားသူက သာဓု မခေါ်နိုင်တဲ့ နေရာရောက်နေရင် အဲ့ဒီ အလှူဟာ သေသွားသူ အတွက် မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ အမျှဝေရင် သေသွားသူနှင့်တကွ အနီးအပါး ရောက်နေတဲ့ သူတွေပါ ရကြ ယူကြ ပါစေလို့ အမျှဝေသင့်တယ်။
အချို့လူတွေက အမျှဝေရင် ငိုသံပါကြီးနဲ့ ဘယ်သူရေ၊ ဘယ်ဝါရေ အမျှ .. အမျှ .. အမျှ ယူပါ .. ဆိုပြီး အမျှဝေတာ တွေ့ဖူးတယ်။ သူ့အမျှမှာ ကျန်တဲ့ သတ္တဝါ မပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ နောက်ပိုင်းမှာ အချို့သော ဘုန်းတော်ကြီး များက ရှေ့ကနေ အမျှဝေဖို့ တိုင်ပေးတယ်။ ကဲ လိုက်ဆိုကြ။ အမျှ အမျှ အမျှ အားလုံး ရကြစေ ဟဲဟဲ။
သေပြီးမှ သရဏဂုံတင်တာ လေးလဲ ဆွေးနွေးပါအုံးဗျ
တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ လူတွေက သိပ်ခက်တယ်ခင်ဗျ။ သေပြီးမှ တန်ဖိုး သိတတ်ကြတာ။ သေပြီးမှ မေတ္တာတွေ ထားတတ်ကြတာ။ အဲ ဒါပေမယ့် သေပြီးမှ ဆဲဆိုရဲတာတွေလည်း ရှိသေးသဗျ။ ကိုကြီးမိုက် ပြောတဲ့ သေပြီးမှ သရဏဂုံ တင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း တွေးကြည့်ရင် ရယ်ချင်စရာကြီးပါပဲခင်ဗျာ။ သေပြီး သရဲ ဖြစ်တယ်ထားတော့။ သရဲ ဆိုတာမျိုးက ဘုရားစာတွေ ကြောက်တတ်တယ် မဟုတ်လား။ ဘုန်းကြီးသရဲတော့ မပါဘူးပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ။ သရဲ ဖြစ်သွားတဲ့ သေသွားသူကို သရဏဂုံ တင်တယ်ဆိုတော့ သေသွားသူအတွက် ဘာမှ မဖြစ်တဲ့အပြင် ထွက်တောင် ပြေးရတော့မယ့်ကိန်း ခင်ဗျ။ ဒါက အများ အယူအဆ သေပြီး သရဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောတာပါ။ နောက်မှ ဒါကို အကျယ် ဆွေးနွေးဦးမယ်ဗျာ။
ဒီထက်​ နဲနဲ ပိုပြီး ကျယ်​ကျယ်​ပြန့်​ပြန့်​ ​ရေးသား​ဆွေး​နွေး​စေချင်​ပါ​ကြောင်းးး
ကိုစာမိရေ ဒီလေသံမျိုးနဲ့ ကျုယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးသားဆွေးနွေးရင် ခဲတွေ တုတ်တွေ ရောက်လာမှာစိုးလို့ ခင်ဗျ ဟဲဟဲ။ ပြောင်တာပါ။ ရေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ။
ပြောနေကြတာတော့ အများကြီးပါ .. တစ်ကယ် မသေခင်က ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ပွားများခဲ့ပြီး သေခါနီးမှာ အတွယ်အတာအနှောင်အဖွဲ့တွေဆီ စိတ် မရောက်ခဲ့ရင် ကောင်းရာဘုံကို လုံးဝ ရောက်မယ် ..
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတွေတော့ ရှိပါရဲ့ သေခါနီး စိတ် မဖြောင့်ခဲ့ရင် ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ် ဆိုတဲ့ ဘုံကို ရောက်တာ များတယ် .. အဲဒီအခါ အလှူပေးပြီး သာဓုခေါ်စေရင် အရင် ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာလေးနဲ့ ကောင်းရာဘုံကို ရောက်မယ် ..
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ အားနည်းခဲ့မယ် .. မရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင် အောက်ဘုံကို ရောက်တာ များတယ် .. သာဓုခေါ်ဖို့ ခက်တဲ့ နေရာကို ရောက်တတ်တယ် ..
ဒါကြောင့် မသေခင်ကတည်းက ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကို မလွတ်စေခဲ့ရင် ကောင်းရာရောက်ဖို့ သေခါနီး အချိန်ပဲ အရေးကြီးတယ် .. အဲဒီအချိန်မှာ သံယောဇဉ်တွေ မတွယ်စေဖို့ အနီးအနားမှာ ရှိနေမယ့်လူက ဆင်ခြင်ပေးဖို့ လိုမယ် .. ဒါမှ အသေဖြောင့်တယ် ဆိုတဲ့ စကားက မှန်မှာ ..
သံယောဇဉ် ဆိုတာမျိုးက လွယ်လွယ်နဲ့ ပြတ်တတ်တဲ့ အရာမျိုးမှ မဟုတ်တာပဲ ခင်ဗျ။ ဒီတော့ သေခါနီးအချိန် အရေးကြီးတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် သေခါနီး မစွဲမိဖို့ ကြိုတင်ပြီး အတော် လေ့ကျင့်ယူခဲ့မှသာ သေတဲ့အခါ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်တတ်တာမျိုး ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် အသေကောင်းဖို့ မသေခင်က အရင်လေ့ကျင့်ထားကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ နေဦး။ မသေခင် ဗိုက်ကလည်း အရေးကြီးသေးတယ်။ ဒီတော့ မသေခင် အားတဲ့ အချိန်လေး အစမ်းသေ လေ့ကျင့်ကြပေါ့ ဟဲဟဲ။
သေပြီးမှ သေသူအတွက် သာဓု ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ မလွယ်လှပါဘူးဗျာ။ တစ်မြို့တည်း နေတာခြင်း တူတာတောင်မှ တွေ့ဖို့မလွယ်တဲ့ ကိစ္စကို သေပြီး ရောက်ချင်ရာ ရောက်နေတဲ့လူအတွက် သာဓု ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စက သာပြီး မခက်ပေဘူးလား ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတော့ ဖုန်းတွေ၊ အင်တာနက် တွေနဲ့ ဆက်သွယ် ခေါ်ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ ဟဲဟဲ။
သေတဲ့သူကို မူတည်ပြီး သက်ပျောက်ဆွမ်းကပ်တယ်။
သေတဲ့သူကို မူတည်ပြီး သရဏဂုံတင်တယ်။
သေတဲ့သူကို မူတည်ပြီး မြေဆင်းသပိတ်ဆွမ်းလောင်းတယ်။
သေတဲ့သူကို မူတည်ပြီး ရက်လည်ဆွမ်းသွတ် လှု မျှ ဝေတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျန်ရစ်သူက တကယ်လုပ်တာမို့ အခုလိုဘဲပြောချင်ပါတယ်၊
“မိမိကောင်းမှု အကြောင်းပြု တောင်းဆုပြည့်ပါ့မယ်´´ လို့။
ဟုတ်ပါတယ်။ အချည်းအနှီးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ပြုသမျှ ရကြမှာပါပဲ။ အနည်း၊ အများတော့ ကွာကောင်း ကွာလိမ့်မယ်ပေါ့။ ဒါဟာ ထားတဲ့စိတ်အပေါ်မှာ မူတည်မယ် ထင်တာပဲ။
အယူသည်းမှုများအတွက် ကိုကျော်သူရဲ့ ရှင်းတမ်း
သာဓု… သာဓု… သာဓု….
ကြားဖူးတာကတော့.. သာဓုခေါ်လို့ရတာ ပြိတ္တာဘ၀တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်… ပြီးတော့ စုတိစိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့ ပဋိသန္ဓေစိတ် တန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ နောက်ဘ၀တန်းရောက်တယ်… မကျွတ်မလွတ်တယ်ဆိုတာ ပြိတ္တာဘ၀မှာ ပြိတ္တာခန္ဓာရတာကို ပြောတာပါ… ဆိုတော့ သေတဲ့သူက ပြိတ္တာဆိုရင်တော့ ကိုယ်အမျှပေးရင် ရနိုင်တာပေါ့… ဒါမှမဟုတ်ဘဲ ကျန်တဲ့ဘုံတွေရောက်နေရင်တော့ သာဓုခေါ်လို့ မရပါဘူး..ကိုယ့်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးကို ကိုယ်ပဲရပါတယ်… ပတ်ဝန်းကျင်က ပြိတ္တာတွေ ကျွတ်ချိန်တန်လို့ ကိုယ့်အမျှကို သာဓုခေါ်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့..
ဟဲ… သိသလောက်နဲ့ လျှောက်ပွားကြည့်တာ..တကယ်တော့ အနော်လည်း သရဲကြောက်တယ်… ဟီးဟီး..
ကျောက်တပ်ရင် အံဇာ့ဂို ဖက်ထား… လွတ်ကျသွားမှာစိုးလို့ဗာ…. ကွိ ကွိ.. ကျောက်က တန်ဖိုးကြီးဒယ်လေ..
သာဓု ခေါ်လို့ရတာ ပြိတ္တာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ လူတွေလည်း သာဓုခေါ်လို့ ရကြပါတယ်။ တကယ် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ သာဓုခေါ်ရင် ကုသိုလ်ရဲ့ အဖို့ကို ရနိုင်ကြပါတယ်။ သေတဲ့လူက ပြိတ္တာဆိုတဲ့ အပါယ်ဘုံသားမျိုး ဖြစ်သွားရင်တော့ သူ့အတွက် ရည်စူးပြုတဲ့ ကုသိုလ်အဖို့ကို သာဓု ခေါ်ဆိုခွင့်ဟာ သိန်းထီဆုကြီးပေါက်သလိုမျိုးလို့ ပြောလို့ ရလေမလားပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြိတ္တာဖြစ်သွားတိုင်းလည်း ရမယ်လို့ မဆိုနိုင်ပြန်ဘူး။ နေရာဒေသနဲ့ အမျိုးအစားပေါ်မှာ မူတည်သေးတယ်။
တချို့ အိမ်စောင့်နတ်နဲ့ရင်နှီးတဲ့ ………. မကျွတ်မလွတ်တဲ့သူတွေဆိုပြတင်းပေါက်မှာမေးတင်ပြီး
ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီဒုက္ခကနေ ကယ်ဆယ်ပေးမယ့်လူကို စောင့်မျှော်နေတတ်ခြင်းဟာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒီတော့ သာဓုခေါ်ဖို့အတွက် စောင့်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်စောင့်နတ်နဲ့ ပြိတ္တာနွယ်ဝင်တွေ ရင်းနှီးမှု ရှိ၊ မရှိ။ ပြတင်းပေါက်မှာ မေးတင်ပြီး စောင့်၊ မစောင့် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒါက စာပန်းချီအရ ရေးဖွဲ့ထားခြင်းသာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဂလိုရှိသဗျ ကိုဒွတ်ခရ… အဘိဓမ္မာအရ မှန်ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ တမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ စာမှားဒါတော့ အဟုတ်ဖူး… စာဆိုဒါ ယေဘူယျ ညွှန်းဒါ။ ခေတ်ဆိုဒါ ရှိသေးလယ်။ အစွဲကြီးဒဲ့ခေတ်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ သေရင် သရဲအဖြစ်များဒါ အဆန်းဘူး ပြောရမယ်။ အဲဒီခေတ်ကုန်၊ လူမျိုးတုံးသွားဒေါ့ ငရဲအရောက်များရင်လည်း များကြမှာပေါ့… အပြောဓာတ်ဗူး..။ ဘာလို့ ဒီလိုပေါရသလဲဆို သေပြီး ခုနှစ်ရက် မရှိဗာ စွတ်ပြောဗျံတော့ လက်တွေ့ကြုံဒဲ့အခါ ဇဝေဇဝါဖြစ် ပိုရှုပ်ကုန်ရော။ အဲဒီမှာဒင် ဘုရားဟောကိုတောင် ရောယောပြစ်မှားမိပီး ပိုအယူလွဲဒက်တယ်။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့လည်း အများဂျီး ဆိုင်သေး၏။ ကြက်တူရွေးဃတော်တော် မယ်ဒေါ်ဂ ကဲကဲဆိုသလို ထင်ယောင်ထင်မှား ချဲ့ကားမှုတွေကြောင့်လည်း ပိုကျယ်ပြန့်ရတယ်။ ဘာသာခြားတွေဆို သူတို့ကောင်းကင်ဘုံကလွဲရင် အခြားစွဲလန်းမှု မရှိလေဒေါ့ သေပြီး ခုနှစ်ရက်၊ လူဝင်စား၊ ၃၁ဘုံကိစ္စ အတော်နည်းဒယ်။ ဖြစ်လည်း မီးများမီးနိုင် ရေများရေနိုင် အစပျောက်သွားရော…။ ယုံနေရင်ကို ဘုရားသခင်ကို စော်ကား ဆန့်ကျင်သလို ဖြစ်နေမှာဂိုး…။ ရှေ့နောက်ဘဝ လက်ခံတဲ့ ဟိန္ဒူနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့ ဒါမျိုး မရှိပါ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရဘူး။ ဒီတော့ ရှိတယ်ဗျာ.. အစွဲများတဲ့ခေတ်မှာ ပိုရှိဒယ်.. အစွဲနည်းဒဲ့ခေတ်မှာ သိပ်အရှိဗူး..။ ဘာလို့မရှိလဲ တဝက်က အပါယ်လေးဘုံ မျှရောက်သွားပြီး ကျန်တဝက်က အင်ဆိုတော့ ခေတ်နဲ့အံမဝင်လို့ လူဆိတ်အဝင်ဇားဗူး..။ ဒီနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်ကဒေါ့ အစွဲများဒဲ့ခေတ်ဗျ… မြောက်ဖက်က ကြေးမုံဂျီးဒို့အမျိုး မဟုတ်တရုတ်ပြည်ဆိုလဲ ကူမြူနစ်သာဆိုဒယ် ကြီးလိုက်တဲ့အစွဲ… တခါသေရင် မပီးနိုင်မစီးနိုင် ချဲ့လိုက်တဲဇာ… ဒါကြောင့် သူ့ဂို အယူဒေါ့ဗူး… မသာစရိတ် အတတ်နိုင်လို့…။ အနောက်က အိန္ဒိယဆိုလည်း ကမ္ဘာမှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဟိန္ဒူဝါဒ… ဒင်းတို့က ဇာတ်နိမ့်၊ဇာတ်မြင့်နဲ့ သာဆိုးသေး..။ အရှေ့ဖက် ထိုင်းဆိုလည်း ဟိန္ဒူဝါဒကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်လာတာမို့ အယူအစွဲမှာ မြန်မာပြည်ထက် ပိုများမယ် ယူဆရဒယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကြတော့ မူဆလင်ဖြစ်ပေမဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်တွေ… သူတို့ဆီမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာက လက်မခံတဲ့ အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ ဗေဒင်ဟူးရားအတတ်တွေ ထွန်းကားသဗျ.။ ဆိုဒေါ့ဂါ ဒင်းရို့ဂျားဒဲဃ မြန်မာပြည်လည်း ဘာကောင်မို့လဲ… ရောယောင် စွဲတော့ဒါပေါ့….။
ဦးကြောင်ကြီး ရေးတဲ့စာတွေကို မနည်းကိုပဲ ပြူးကာပြဲကာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အတော် စကားလုံး အစားထိုး တော်တာပါပဲလားခင်ဗျ။ ဦးကြောင်ကြီး ပြောသလိုမျိုး ခေတ်ကိုက အစွဲကြီးတဲ့ ခေတ်ပဲ ဆိုရတော့မယ်။ ကပ် ကလည်း ဆုတ်ကပ် ကိုခင်ဗျ။ ဒီတော့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာဟာ အများကြီး အပြစ်ဖို့လို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ညှိုးညွှန်ရာ ဘုန်းကြီးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဒီလို အယူအဆ မှားယွင်းနေတာဟာ သိပ်တော့ မနိပ်လှဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
အယူသည်းမှုပေါင်းများစွာကဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာထက်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံတွေတပုံကြီးမို့ကမ္ဘာ့အလယ်မှာရှက်စရာမ ကောင်းလှတယ်ဆိုပြီး သိမ်ငယ်နေကြစရာဖြင့်မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
ငြင်းခုန်နေခြင်း မဟုတ်ပါဘူး နန်းတော်ရာသူ။ ပစ်မှတ်လွဲနေတဲ့ မြှားချက်တွေကို တည့်မတ်စေချင်တာပါ။ ဘုရားဟော အခြေခံထဲမှာ ၃၁ ဘုံဆိုတာ ပါပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် သေပြီဆို ၃၁ ဘုံထဲက ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘုံမှာ ဖြစ်မယ်။ ဒီအချက်ကို အခုခေတ်မှာ မှားယွင်းစွာ လက်ခံနေကြတယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ မနက်ကတောင်မှ သမီး ဆုံးသွားတဲ့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ စကားသံကို ကြားခဲ့ရသေးတယ်။ ငါ့သမီးကလည်း သေပြီးရက်ပိုင်းလေးပဲ အိမ်ကို လာလိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်း လာတောင် မလာတော့ဘူး။ အေးလေ သူလည်း သူ့ဘဝမှာ သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ ပျော်နေတော့မှာပေါ့ ဆိုပဲ။ ဒါဟာ ဘာကို ပြသလိုဆိုရင် သေပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ဝိဥာဉ်အဖြစ်နဲ့ အိမ်နားမှာ တဝဲလည်လည် ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူမှားကို ခိုင်မာစေကြောင်း သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သေပြီးတဲ့လူဟာ သူ့ရဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်၊ သေခါနီး အစွဲ၊ ဇော စတာ စတာတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရောက်ချင်တဲ့ ဘုံကို ရောက်မှာပါ။ စကားစပ်မိတုန်းမှာ ထပ်ပြောလိုက်ရရင် သိုက်ကလာတာ သိုက်ကလာတာ ဆိုပြီး တသိုက်ထဲ သိုက်နေကြတဲ့ ကိစ္စကလည်း အတော်ရယ်ချင်စရာပါပဲခင်ဗျ။
သေပြီးသူကို လွမ်းဆွတ်ပြီးပူဆွေးနေတဲ့ကျန်ရစ်သူတွေကို.. ဘာသာရေးအသိကြွယ်ဝတဲ့.. ရဟန်းတွေက.. ဖြေလျှော့ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတာကိုး..
တာဝန်ရှိလို့.. ဘလိုင်းကြီးကြွလာလို့မရတာမို့.. ဇတ်လမ်းလေးလုပ်..ရိုက်သွင်းပေးထားလိုက်သပေါ့…။
အဲဒီတော့မှ.. ရှေ့မှာထိုင်… ကဲလိုက်ဆိုဆိုပြီး.. ဆုံးမရင်း.. တရားချရတာပါ…။
ပြောရရင်.. အယ်လ်အေကကျုပ်ဘုန်းကြီးဆို.. မိခင်ဆုံးတုံးပင့်ဖိတ်တော့..သာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ.. ၀.၀၁ရာနှုန်းတောင်မရှိပဲ.. စိတ်ချမ်းသာအောင်စိတ်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာပါဆိုတာလေးပါ.. ထည့်ဟောပေးသွားတာ..
ကျုပ်စိတ်ထဲမတော့.. သေရင်..မရှင်တော့ဘူးလို့ပဲ.. မြင်သဗျ..
သဂျီးဂ ရှင်လျက်သေနေဒါဗျ.. မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမို့…
” ဇတ်လမ်းလေးလုပ်..ရိုက်သွင်းပေးထားလိုက်သပေါ့…။ ”
သူကြီး ပြောတော့မှပဲ ၊
သမိုင်း ပညာရှင် ဒေါက်တာ သန်းထွန်း ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေး ပြန် မှတ်မိပြီး ၊ ပြုံး မိတယ် ။
” ဦးကုလား ရာဇဝင် နှင့် မှန်နန်း ရာဇဝင် က ၊
အထဲမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဇတ်ညွှန်း ပါ ( တစ်ခါတည်း ) ပါပြီးသား ၊
ဒါမျိုး ( ဒို့ မယုံ ) ငါတို့ မသုံးဘူး ” တဲ့ ။
မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်ဆောင်ပြီး လျှောက်ရေးခဲ့တာတွေလေ ။
၁ ။ မြန်မာ လူမျိုး ကို ဘုရား ရဲ့ အမျိုး သာကီဝင်တွေနှင့် အတင်း အမျိုးစပ် ။
၂ ။ လမ်းဘေးက မင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်တွေ အတွက် ၊ ဘုန်းကြီးတယ် ထင်ရအောင် ၊
ဇတ်တော်ကြီး ၅၅၀ ထဲက ဇတ်လမ်းတွေကူးချပြီး သမိုင်းထဲ ထည့် ရေးပေး ။
၃ ။ လက်ရှိ ဘုရင် ကို ဒဲ့ မဆုံးမရဲတာ နှင့်ပဲ ၊
ဘေးလောင်းတော် ဘိုးလောင်းတော် တွေရဲ့ ပြောစကား ဆိုပြီး သမိုင်းထဲ ထည့်ရေး ။
လုပ်ချင်သလို ကို လုပ်ခဲ့ကြတာလေ ။
ဒါနဲ့ပဲ မြန်မာ့ ရာဇဝင် စာအုပ်တွေလဲ တန်ဖိုး လျော့ကျကုန်ပြီး ။
မြန်မာ့ သမိုင်း ရာဇဝင် စာအုပ်တွေ ကို ၊
မြန်မာ သမိုင်း ပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ကကို မသုံး / လက်မခံ တော့တဲ့ ဘဝ ရောက်ကုန်တာ ။
ချဲ့ကားရေးတဲ့ မြန်မာရာဇဝင်လိုဗဲ လိုတမျိုး မလိုတမျိုး လိပ်လို ကိုယ့်ဖက်ယက် ဆွဲပြောဓာတ်တဲ့ ၇၈၆ အိုအိုင်စီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အယာတိုလာ မာမွတ်လျှာပွတ်ခိုမ် စဂါးကိုလည်း တက်သည့်ပြင်ညာရှင်များ အယုန်ကြတော့ဗူး…..။ ဦးဖော ယုန်ခြင်ယုန်.. မတက်သေးရင်ပေါ့.. ဂစ် ဂစ်…
“ငိုစား၊ ရီစား” ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဘုန်းကြီးလောကမှာ ရှိတယ်ခင်ဗျ။ အသုဘလည်း စားမယ်။ မင်္ဂလာပွဲလည်း စားမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီး အများစုကို စစ်တမ်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ငိုစား သိပ်ပြီး အားသန်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။ ရှိပါစေတော့။ အမျှဝေတဲ့အခါ ရည်စူးသူအတွက် မရနိုင်လည်း အခြားသော ပြိတ္တာတွေအတွက် ရနိုင်တဲ့အတွက် အကျိုးမယုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမျှဝေနည်းကိုတော့ ဘုန်းကြီးတွေက သေချာသင်ပေးဖို့ လိုတာပေါ့။ ကဲ .. လိုက်ဆိုကြ။ အားလုံးကြီး ကြားကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ ။
မြန်မာတွေကမှာ တပါတ်ပဲကျွေးတာတော်သေးတယ်။ ကိုရီးယားတွေကပိုဆိုးသေး။ ရှိတုန်းကောင်းကောင်းမဆက်ဆံ သေမှ အစာတွေသွားကျွေး အရက်တွေသွားတိုက်နဲ့။
ပုထုဇဉ် မှန်သမျှ အရူးချည်းပါပဲ။ သူ့နေရာနဲ့သူ နည်းနည်း ရူးတာနဲ့ များများ ရူးတာပဲ ကွာပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စမှာကြည့်ရင် ကိုရီးယား တွေဟာ မြန်မာတွေက ပိုရူးကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။
အဲဒီ တေမယ့် ကိစ္စဂျီးကလည်း
နင်သေမှ ငါကိုယ်တိုင် ထီးတံခွန်ပေးပြီးအမျှဝေပေးမယ်
အင်တာနေရှင်နယ် ထီးတံခွန်အရောင်းဆိုင် မန်နေဂျာ